192.168.8.1 - Yevatema / Vharidzira Vashandisi veWiFi
Nhema / Vharidzira Vashandisi veWiFi - Kunyangwe ichichengetedzwa nemaarufabheti kana tsamba kana zvese zviri zviviri, zvinokwanisika kuti semutauri uwane kupinda muhofisi yako kana pamba WiFi network. Unogona kurohwa nemhondi, munhu anopfuura kana muvakidzani wako, asi chero vari, zvakakosha kuti uzive nzira yekuwana kana gadget isiri pamutemo kana isingazivikanwe yakabatana netiweki yako yeWi-Fi uye pakupedzisira, gumira kupinda kwavo & kuvharira.
Uye kana uchichinja password yako router ndiyo nzira yakanakisa yekumanikidza kuwanikwa kweiyo isingazivikanwe gadget, ingati inonetesa & inopesana inogadzira. Iko zvirokwazvo hapana vimbiso yekuti uyo anoteedzera haazopaza 'password' yazvino uyezve kuwana-kupinda kunetiweki yako.
Pazasi Akanyorwa pane mashoma akavimbika nzira dzekuona & misa mumwe munhu kana magajeti pane yako Wi-Fi network pasina kushandura yako router password.
1. Kuchenesa Wireless MAC Kero
MAC kusefa kunobatsira Kuvharira Vashandisi veWiFi maodhijisheni asina kubvumidzwa kuti ubatanidze kune yako Wi-Fi, network.MAC Kero ndeye (Hardware) ID nhamba iyo inowana zvese zvishandiso pane network MAC Kero inogadzirwa mune yega yega kadhi kadhi & hapana ma2gadhi mune yepasi anogona kunge aine yakafanana MAC kero.
Saka nekushandisa MAC kero kifaa, iwe unogona izvo zvinombo gadziridza yako router kubvumidza kana kuramba kupinda kwechigadzirwa kunetiweki.
Kuti uite izvi, pinda kune iyo router's Yekupinda Point control panel
Pasi pechikamu cheWLAN kana Wireless pane iyo koni, iwe unofanirwa kutarisa iyo MAC Kuchenesa sarudzo.
Kana ikasamisikidzwa, chinja iyo MAC Kuchenesa chimiro kuti 'Chibvumirwe'
Tevere wedzera zvishandiso pane yako runyorwa rweMAC Kero & sarudza kana iwe uchida kudzosera kana kubvumidza yavo yekupinda kune yako router router.
2. Direct Dzvanya
Mashoma maWiFi mairaira anotendera vatengi kuvharira zvisingazivikanwe zvigadzirwa nekuvawedzera kune Yevatema mazita nekusundira kwekiyi. Izvi zvinopesana pamwe nema rauta mabara asi iwe unogona kazhinji kuwedzera zvishandiso kune yako router's Rondedzero pazasi pechikamu 'Chishandiso Management' cheyako yekuwana poresi koni / control pani kana chero zvakadaro chikamu chikamu chinonyora zvese zvigadzirwa zvakabatana kune yako router. Ikoko iwe unowana "block" mutengi kiyi kana chimwe chinhu zvakafanana.
3. Mobile Mapurogiramu
Kana iwe uchitsvaga yakavanzika uye yakapusa nzira ku bvisa zvisingazivikanwe zvigadzirwa kubva kune yako WiFi netiweki, kune anoshanda echitatu-bato netiweki michina iwe yaunogona kubatanidza kune yako kifaa panzvimbo yekupinda mukati meiyo raira control panel. Semuenzaniso FING, inowanikwa yeIOS & Android zvishandiso & inokupa sarudzo yesarudzo yekudzora kubvumira vashandisi ku:
Bvisa stalkers & maturusi asingazivikanwe, kunyangwe kare ivo vanobatana kunetiweki yako
Inokutumira yambiro kana chishandiso chitsva chiri pane yako network. kungoona vapomeri (s)
Wona rondedzero yezvakasiyana / zvishandiso netiweki yako
Tora kukosheswa kwekuona kwese kweIP kero, modhi, MAC kero, zita rechishandiso, mutengesi & mugadziri
Gamuchira zviyeuchidzo zvemidziyo & network chengetedzo kune yako email nefoni
Zvisinei nekuti gadget yakabatana sei netiweki yeWiFi, unogona kuvadzivirira neimwe yenzira nhatu dziri pamusoro usinga shandure password yako.